Wararka - Bandhigga Wax-soo-saarka Caalamiga ee Indonesia
Bacda hoose ee Flat
Bacda safka hawada
Bandhigga Boorsooyinka Caalamiga ee Indonesia
Tallaabo kasta oo Hongbang ah waxaa ka buuxa goosashada. Bandhigga caalamiga ee ka dhacay Indonesia, Hongbang mar kale ayuu u baxay. Waxay ahayd guul dhameystiran waxaana lagu wareystay barnaamij TV maxali ah. Bandhigan, waxaan markale ku muujineynaa ruuxa Hongbang - midnimo, togan, halgan adag. Markasta oo lala xiriiro macaamiisha waa la aqoonsan karaa macaamiisha. Safar kasta wuxuu muujinayaa qaabka hongbang.
Tani waa kooxdeena jecel, sharafta leh, shaqada badan.
Marka hore, ku adkeyso fikradahaaga iyo waxa aad aaminsan tahay. Iimaanku waa xoogga dhaqaajiya shaqada oo dhan, waa jihada, waa nalka. Kaliya markaan helno jiheyn cad ayaan si hufan ugu shaqeyn karnaa.
Marka labaad, waa inaan si adag wax u baranaa oo aan kor u qaadnaa tayadeena markasta. Waa inaan maskaxdeenna ku qalabeynno aragtiyaha sayniska, si sax ah u fahamnaa isbeddelka horumarka bulshada, aasaasnaa aragtida adduunka ee saxda ah, aragtida nolosha iyo qiyamka, iyo horumarinta caadada barashada nolosha oo dhan. Waa inaan si joogto ah u dhisno fikradaha cusub, aan baranno aqoon cusub oo aan u baranno xirfado cusub, si aan ugu biirino xikmaddeena iyo caqligeenna horumarka iyo koritaanka Hongbang.
Mar saddexaad, xubin xubin ka ah baakadaha 'Hongbang', waa inaan horay u sii socono oo aan yeelano geesinimo aan wax ku cusboonaysiinno. Mar kasta oo hongbang wax cusub soo bandhigo, waa inuu u hoggaansamo fikradaha horudhaca ah iyo kuwa hal-abuurka leh, isla markaana si dhow isugu daraa shuruudaha madaxda iyo astaamaha The Times iyo xaqiiqda, una fuliyaa shaqada hal-abuur. Waa inaan buuxinaa firfircoonaan iyo firfircooni. Sida ciidanka cusub iyo kumaandooska ee Hongbang, waa inaan ku shaqeynaa xamaasad kuna noolaano farxad.
Saaxiibbayaal, aan wada shaqeyno, ubax shub ubax, dhidibbada qaansoroobaad ee kan ugu fiican labada gacmood, isu soo wada ururiya xoogga dadka oo dhan, u midoobi sidii mid, u dadaal, oo u qor cutub aad u wanaagsan taariikhda weyn Guulaha Hongbang ee horumarka!
Waqtiga boostada: Nofeembar-06-2020
Cinwaanka: Room 607, dhismaha C, xiangzhigu, 58 NANLIAN Road, Degmada Longgang, Magaalada Shenzhen, Gobolka Guangdong
Rajada horumarka ee boorsada warqad gacmeed
Hong Kong Daabacaadda iyo Xirmooyinka ...
Right Xuquuqda daabacaadda - 2021-2023: Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay.